Posted on Waxaa laga yaabaa 11, 2022 Waxaa laga yaabaa 11, 2022 by Fei (aasaasaha)
4 Sofrim-Jumlo Warshado Dharka laga isticmaalo ee Singapore
5 Hal qayb oo ka mid ah EWT LTD
6 Warshadaha Dharka La Isticmaalo Jumlada ee Singapore Gabagabada
Marka loo eego tirakoobkii ugu dambeeyay, 2020-meeyadii, Singapore waxay soo dejisay $6.87M Dhar la isticmaalay, taasoo noqotay 83-aad ee ugu muhiimsan soo dejinta Dharka la isticmaalay adduunka oo dhan. Singapore waa meel kulul oo loogu talagalay warshadaha dharka ee la isticmaalay sabab wanaagsan. Haddii aad ku jirto jumlada ganacsiga dharka gacanta labaad, waxaad u baahan tahay inaad ka warqabto warshadaha dharka ee ugu sarreeya ee Singapore. Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa talo ah tayada iyo noocyada kala duwan ee dharka ay warshad kasta. Waxaan rajeyneynaa inaad hesho mid ku habboon baahiyahaaga.
Hissen waa dhoofiye sare oo ku takhasusay jumlada dharka la isticmaalay. Xarumahooda waxay ku yaalaan Guangzhou, Shiinaha, waana ciyaaryahan muhiim u ah warshadaha dharka gacanta labaad ee caalamiga ah. Iyada oo sannado badan oo waayo-aragnimo ah laga helayo dharka la isticmaalo ee tayada sare leh ee Afrika.
Hissen waa mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha dharka la isticmaalo ee la isku halayn karo ee adduunka. Waxay ku qalabaysan yihiin SGS, COC, iyo sidoo kale shahaadooyinka qiiqa. Dharkooda la isticmaalay ayaa ah kuwo tayo wanaagsan leh, waxayna leeyihiin xulasho ballaaran oo ah dharka la isticmaalo ee ragga, dumarka iyo carruurta. Qodob dheeri ah, jadwalkooda dhoofinta iyo waqtiga xaddidan waxay u muuqdaan inay ka aamin badan yihiin Yurub ama Ameerika.
Isku soo wada duuboo, waxay ka dhigaysaa dharka Shiinaha loo isticmaalo si aad ah looga raadsado warshadaha dharka gacanta labaad. Haddii aad raadinayso dhar la isticmaalay oo dib-u-iibsi ah ama kaliya buuxinta kaydkaaga, Hissen waa doorashadaada saxda ah.
Shirkadda Little Hands waa bixiye hindise dib u warshadaynta dharka gacan labaad kaas oo u heellan hagaajinta ganacsigeeda. Waxay inta badan ka soo ururiyaan hay'adaha samafalka, iyo machadyada gobolka si ay qiimo uga helaan dharka la isticmaalay. Si ka duwan barnaamijyada kale ee dib-u-warshadaynta dharka.
Gacmaha Yaryar waa urur firfircoon oo gacan ka geysta saameyn ku yeelashada warshadaha dharka gacanta labaad iyadoo bixisa xulashooyin jumlo ah oo jaban. Waxay ka soo ururiyaan dharka la isticmaalay ilo maxalli ah waxayna ka shaqeeyaan si aan daal lahayn si ay alaabtan u soo galiyaan suuqa.
Haddii aad raadinayso dhar la isticmaalay oo tayo sare leh ama aad xiisaynayso inaad la shuraakoobaan.
Junas LTD waxaa la aasaasay 1998. Waxay ku taal Lithuania, kooxdeeda xirfadleyda ah waxay qabataa habka xulashada taxadar leh. Waxay rabaan inay u xaqiijiyaan macaamiisha Junas inay helaan moodkii ugu dambeeyay iyo dharka ugu tayada wanaagsan ee suurtogalka ah.
Dharka la isticmaalo si fiican ayaa loo eegaa waxyeelada. Alaabtaasi kuma qancin heerarkooda, ma ilaalin doonaan. Waxay u ogolaataa inay macaamiishooda siiyaan dharka gacan labaad ee ugu fiican ee suurtogalka ah.
Junas LTD waa ikhtiyaar aad u fiican kuwa raadinaya alaab-qeybiye la isticmaalay. Doorashadooda waa mid cajiib ah, qiimahooduna waa mid aan laga adkaan karin.
Sofrim-Jumlo Warshado Dharka laga isticmaalo ee Singapore
Sofrim waa dhoofiyaha dib u warshadaynta dharka ee la isticmaalo in ka badan 30 sano oo waayo-aragnimo warshadeed ah. Waxay si dhow ula shaqeeyaan in ka badan 100 magaalo iyo degmooyin Yurub oo dhan ah, iyo saldhigga macaamiishooda ayaa si joogto ah u koraya.
Ujeedada koowaad ee Sofrim waa ka soo saarida alaabta ceeriin ee la isticmaalay ee Talyaaniga iyo Switzerland. Nidaam kala soocid ballaaran ka dib, waxay ku siin karaan baakado la dhammeeyey oo ah dharka la isticmaalay oo ah heer jumlo ah, sida caadiga ah qiyaastii 80 tan todobaadkii.
Iyada oo ay ka go'an tahay tayada, isku halaynta, iyo ku qanacsanaanta macaamiisha, shirkaddani waa doorashada-doorashada ganacsiyada warshadaha dharka ee la isticmaalay. Markaa haddii aad raadinayso dhar jumlo ah oo la isku halayn karo, Sofrim ayaa ku habboon.
Hal qayb oo ka mid ah EWT LTD
EWT LTD, waxay aad u xiiseeyaan dharka iyo dharka la isticmaalay. Sida mid ka mid ah hormoodka dhoofinta dharka la isticmaalo, takhasuskooda ayaa siinaya jumlo dhar gacan labaad ah oo tayo sare leh macaamiisha adduunka oo dhan. Nidaamkooda kala soocida dharka la isticmaalay ayaa ah mid aad u hufan oo dadaal badan.
Haddii aad u baahan tahay kabo la isticmaalay ama xagaaga ama dharka jiilaalka ee ragga, dumarka, ama carruurta, waxay leeyihiin wax daboolaya baahiyaha ganacsiga.
EWT LTD waxay ku siin kartaa dalbashada keenista iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha gudahooda kama dambaysta ah ee lagu heshiiyey. Waxay dammaanad qaadaysaa adeegga macaamiisha oo tayo leh.
Warshadaha Dharka La Isticmaalo Jumlada ee Singapore Gabagabada
Haddii aad raadinayso alaab-qeybiye jumlo ah oo dhar la isticmaalay, Singapore waxay ku siinaysaa dhowr ikhtiyaar. Warshadaha aanu taxnay waxay soo saaraan dhar tayo sare leh oo kaa caawin kara daboolida baahiyahaaga. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad u soo dirto waydiin mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha halkan ku taxan si aad wax badan uga barato wax-soo-saarkooda iyo sida ay uga caawin karaan ganacsigaaga inuu kobco.
Entry waxa loo posted in Industry News iyo tagged hissen, 5-ta Warshadood ee ugu Sarreysa ee La Isticmaalo Jumlada Dharka ee Singapore.
11 fikradaha ah5-ta Warshadood ee ugu Sarreysa ee La Isticmaalo Jumlada Dharka ee Singapore"
47.254.199.218 wuxuu leeyahay,
Waan ogahay in shabakadani ay bixiso maqaallo tayo leh oo ku tiirsan iyo dheeraad ah
xogta, ma jiraan meel kale oo soo bandhigay waxyaalahan oo tayo leh?
May 15, 2022 at 9: 45 pm
dukaan samayn qurxin wuxuu leeyahay,
Haye! Boostada si ka wanaagsan looma qori karo Akhrinta tan
boostada ayaa i xasuusinaysa saaxiibkeygii hore ee wanaagsanaa! Mar walba wuu ka hadlayay arrintan.
Waxaan u gudbin doonaa qodobkaan. Xaqiiqdi waa hubaal inuu aqrin wanaagsan heli doono.
Waad ku mahadsan tahay wadaago!
May 22, 2022 at 12: am 29
GARWA4D | LINKIGA DAFTAR GARWA4D | XIRIIR ALTERNATIF GARWA4D wuxuu leeyahay,
Wow, taasi waa waxa aan raadinayay, maxaa agab ah! halkan ka joog boggan, mahadsanid
May 22, 2022 at 2: 32 pm
ku saabsan wuxuu leeyahay,
Shalay aniga oo shaqada ku jira, walaashay waxa ay iga xaday ipad tufaax ah oo ay tijaabisay bal in ay
waxay ku noolaan kartaa dhibic 30 cagood ah, si ay u noqoto dareen youtube ah. iPadkaygu waa
hadda way jabtay waxayna leedahay 83 views. Waan ogahay in tani gabi ahaanba maqan tahay
mawduuc laakiin waa inaan qof la wadaago!
May 23, 2022 at 12: am 44
samee trang tri cao cap wuxuu leeyahay,
Waa salaaman tihiin jaallayaal, tuduc wacan iyo dood wanaagsan
halkan ka faallooday, run ahaantii waan ku riyaaqayaa kuwan.
May 23, 2022 at 3: 22 pm
May 25, 2022 at 3: am 49
Manhajka cfa beddelka caawinta la rabo wuxuu leeyahay,
Qof ayaa asal ahaan gacan u siiya inuu sameeyo qoraallo adag oo aan sheegi lahaa.
Tani waa markii ugu horeysay ee aan booqdo boggaaga mareegaha iyo heerkan?
Waxaan la yaabay cilmi-baarista aad samaysay si aad u abuurto daabacaad gaar ah oo cajiib ah.
June 3, 2022 at 2: 25 pm
casino ae888 wuxuu leeyahay,
Hoola! In muddo ah ayaan akhrinayay mareegtaada waxaanan ugu dambeyntii helay geesinimada inaan horay u socdo oo aan ku siiyo qaylo ka timid Lubbock Tx!
Kaliya waxaan rabay inaan dhaho sii wad shaqada weyn!
June 3, 2022 at 8: 08 pm
joker dhigaalka123 wuxuu leeyahay,
Ahaa, wada hadal wacan oo ku saabsan qoraalkan halkan mareegtan
site, waan akhriyey waxaas oo dhan, markaa hadda aniga oo sidoo kale ka faalloonaya meeshan.
June 4, 2022 at 6: 54 pm
amaah bixiyayaasha mortgage ugu fiican california wuxuu leeyahay,
Fadlan ii sheeg haddii aad raadinayso qoraa mareegahaaga.
Waxaad haysaa maqaallo aad u wanaagsan waxaana aaminsanahay inaan noqon lahaa a
hanti wanaagsan. Haddi aad rabto in aad culayska ka saarto,
Waxaan aad u jeclaan lahaa inaan u qoro qaar ka mid ah nuxurka
balooggaaga beddelkii isku -xirka aniga
Fadlan ii soo dir email haddii aad xiisaynayso. Mahadsanid!
June 9, 2022 at 1: am 05
Faahfaahin aad u xiiso badan! Kufiican wixii aan raadinayay!
June 23, 2022 at 9: am 33